Ukusetshenziswa kwe-massage yezokwelapha.
Manje ukuhlambalaza abaningi kuye kwaba indlela yokuphulukisa ezifweni. Futhi empeleni, eyenziwe ngezandla ezihlakaniphile zenkosi iyakwazi ukwenza izimangaliso. Uhlu lwezinhlobo zokuphulukisa lukhulu: iphuzu, i-hardware, i-reflex, i-European kanye nabanye abaningi. Ngezinhlobo zokusikhipha zihlukaniswa ngokuthi: i-cosmetology, ukuvuselela, ukwelashwa, ukwelashwa, i-anti-cellulite, uju, njll. Nokho, namuhla sizokhuluma ngokuqondile ngezokwelapha. Ingahle futhi ihlukaniswe ibe yi-subspecies: i-dorsal, i-cervico-collar zone, ubuso, imilenze.
Ukuzibulala kwezokwelapha, ngokungafani nokuphumula okuvamile, kufanele kwenziwe kuphela udokotela, ngoba umgomo ukuphatha umzimba, futhi uma uhlanganyela ekuziqapheleni, khona-ke akekho okwazi ukuqinisekisa imiphumela.
Kungaba jikelele noma wendawo - uma kunomthelela ngqo endaweni okudinga ukungenelela. Ngaphambi kokuba iseshini iqale, udokotela kumele anqume ubude benkambo kanye nenqubo yokuchayeka. Izindlela eziyisisekelo zazo zonke izinhlobo zokubutheka ziyingqayizivele: i-stroking, i-rubbing, i-kneading, i-vibration. Futhi inqubo yenkambiso, ubukhulu nobude buxhomeke esimweni sesifo, inkinga yesifo, ukuqina komuthi, ngezici ezithile.
Ngokuvamile, ukusikhipha imithi kunqunyelwe ukuvimbela nokwelapha uhlelo lwe-cardiovascular, uhlelo lokuphefumula, uhlelo lwe-musculoskeletal, uhlelo lokugaya, isimiso sezinzwa. Futhi emva kwezinhlelo ezimbalwa noma inkambo egcwele, amandla okusebenza kwemisipha ekhuphuka, imithwalo yegazi iyanda, ukunikezwa kwegazi kuthuthukiswa, kungenzeka ukuthi idiphozi ichithe, izinguquko eziningana ezizuzisayo zenzeka emzimbeni, ngenxa yokuthi umzimba uphila kanjani.
Ukusikhipha imithi yezinsana
Ukusikwa kwezingane kwenziwa ukuvimbela nokwelapha izifo ezingase zihlele ingane ngesikhathi sokuqala. Ngaphambi kokuba unyaka wokuqala wokuphila, ingane ingaba nezinkinga ezidinga lolu hlobo lokungenelela.
Ukusikwa kwezingane kungaba nezinkomba eziningana, njengokulungisa amaphutha ekuthuthukiseni amalungu, ukwelashwa kwezifo ezitholakalayo, isibonelo, isimiso sezinzwa, ukuqinisa isimiso somzimba sokuzivikela.
Kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila, umntwana angamsilisa. Kule minyaka yobudala - lo mnene ushaya ikhanda kuwo wonke umzimba, eminwe nasezinzwaneni. Futhi kakade kusukela ezinyangeni zokuqala zokuphila, umntwana unconywa ukuba enze izinqubo zokubuyisela ezihlala imizuzu engu-10-15 njalo ebusuku ngaphambi kokugeza. Ngokuphambene nokwesaba kwabazali, bangakwazi ukubhekana nalokhu msebenzi ngokwabo, kodwa kubalulekile kakhulu isikhathi sokuqala sokumema ochwepheshe. Ngenxa yenqubo yansuku zonke, kungenzeka ukuvimbela i-dysplasia ehambisanayo enganeni (yebo, uma lokhu kungesilo ukulimala kokuzalwa okudinga usizo lomdokotela wezinzwa), ithoni le-muscle. Ungakwazi ukukhulula ubuhlungu ngokubhuqa, colic, ukuthuthukisa ukuhlushwa, njll.
Kodwa-ke, kungakhathaliseki ukuthi ukulimala kwakungenanengozi, kukhona nokuphikisana.
Izifo ezithathelwanayo zephezu eliphezulu lokuphefumula
Izifo zegazi, ukuphuma kwegazi
Imithi ye-umbilical noma inguinal inguinal
Ukulimala kuya emikhawulweni
Izifo zesistimu ye-genitourinary
Ngingathanda ukuphinde ngiqaphele ukuthi ukusikhipha umzimba akusiyo nje kuphela ukuqeda ubuthakathaka, futhi kunomthelela omuhle kuwo wonke umzimba. Ngemuva kwezinqubo, hhayi kuphela ukugula okudlula, kodwa isimo sengqondo sithuthuka, ukukhanya kuvela kuwo wonke umzimba kanye nemicabango. Ungayinaki!
Ukulimala kwamaprotheni emzimbeni: inganekwane noma iqiniso?
Izakhiwo eziwusizo ze-ginger nebhebherikhi
Izifo zamalungu omzimba wesifazane
Isaladi ne-beet nezinkukhu zezinkukhu
Indlela yokwenza i-flashlight yephepha yeNyaka Omusha, isigaba samakhono
Indlela yokukhetha izingubo zenkampani
Izici ezithandekayo nezimbi zomsebenzi ojwayelekile
Izaqathe nezakhiwo zayo ezizuzisayo zomzimba womuntu
Ukuhlelwa okuyisisekelo kocansi olungenakulibaleka
Isaladi ngezimpande zesikhumba esidliwayo esinamagatsha anamanzi